Akụkọ - Sistemụ Ọgwụ Mmiri maka Igwe jụrụ
Usoro Ọgwụ Mmiri maka Towerlọ Egwuregwu Jụrụ oyi
Maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eji ụlọ elu jụrụ oyi maka akụrụngwa ya, ụdị usoro ọgwụgwọ mmiri dị jụụ na-adịkarị mkpa iji hụ na usoro ọrụ dị mma na ogologo ọrụ ọrụ ndụ. Ọ bụrụ na ahapụghị mmiri ụlọ elu jụrụ oyi, uto ahịhịa, mmetọ, ịba ụba, na corrosion nwere ike belata arụpụta ihe ọkụkụ, bute obere oge ọrụ osisi, ma chọọ mgbakwunye ngwa ahịa dị oke ọnụ n'okporo ụzọ.
A jụrụ ụlọ elu mmiri ọgwụgwọ usoro bụ ndokwa nke teknụzụ na-ewepụ na-emebi adịghị gị jụrụ ụlọ elu nri mmiri, mgbasa mmiri, na / ma ọ bụ ịfụ-ala. Usoro nhazi nke sistemụ gị ga-adabere n'ọtụtụ ihe, gụnyere:
•ụdị jụrụ ụlọ elu (emeghe ekesa, otu ugboro-site, ma ọ bụ mechiri emechi akaghị)
•mma nke mmiri oriri
•rụpụta-na-atụ aro quality chọrọ maka jụrụ ụlọ elu na akụrụngwa
•onwu / etemeete nke nrugharị ọbara
•usoro iwu chọrọ maka ihapu
•ma a ga-emeso ma ọ bụ na ọ ga-ada ada maka ijigharị na ụlọ elu jụrụ oyi
•ụdị onye na-ekpo ọkụ ọkụ
•okirikiri nke ịta
Dị ka e kwuru n'elu, ihe ndị dị mkpa nke usoro mmiri ọgwụ mmiri na-ekpo ọkụ na-adabere n'ịdị mma nke mmiri oriri na mmiri ọgwụ nke mmiri na-ekpo ọkụ n'ihe metụtara ịdị mma nke mmiri dị mkpa maka ụlọ elu jụrụ oyi na akụrụngwa metụtara ya. (dịka nkwenye ndị nrụpụtara si kwuo), mana n'ozuzu, usoro ọgwụgwọ ụlọ mmiri dị jụụ na-agụnye ụfọdụ ụdị:
•filtration na / ma ọ bụ ultra-filtration
•mgbanwe ion / nro
Dabere na adịghị ọcha dị na mmiri ahụ, nchikota ọgwụgwọ ndị a nwere ike ịba ụlọ ọrụ ahụ mma ma mejupụta usoro ọgwụgwọ ahụ, yabụ ọ dị mkpa ịkpọtụrụ ọkachamara n'ọgwụgwọ mmiri iji hụ na a na-atụle usoro ziri ezi maka ụlọ elu ahụ. Dabere na mkpa nke ụlọ elu dị jụụ na usoro, usoro ndị a na-adịkarị mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ụlọ elu ahụ chọrọ sistemụ na-enye ntakịrị nhazi, enwere ike ịnwe ụfọdụ atụmatụ ma ọ bụ teknụzụ ịchọrọ ịgbakwunye.
A jụrụ ụlọ elu mmiri ọgwụ usoro nwere ike mejupụtara teknụzụ dị mkpa iji dozie ogo nke:
•alkalinity: ga-ekpebi ikike nke calcium carbonate
•chlorides: nwere ike na-emebi emebi ọla; a ga-anabata ọkwa dị iche iche dabere na ihe nke ụlọ elu na akụrụngwa dị jụụ
•ekweghị ekwe: na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu na ụlọ elu dị jụụ na ndị na-agbanwe ọkụ
•ígwè: mgbe e jikọtara ya na phosphate, ígwè nwere ike ịrụ ọrụ akụrụngwa
•Organic: na - akwalite microorganism uto, nke nwere ike ibute nsogbu, nsogbu, na nsogbu ndị ọzọ
•silica: mara maka ime ka ego siri ike 硬 水垢
•sulfates: dị ka chlorides, nwere ike ịba ụba na ọla
•ngụkọta etisasịwo solids (TDS): eme ka ịba ụba, ụfụfụ, na / ma ọ bụ corrosion
•ngụkọta ihe niile kwụsịtụrụ (TSS): ihe na-emetọ emetọ nke nwere ike ibute ọkwa, ihe nkiri bio, na / ma ọ bụ corrosion
Usoro ọgwụgwọ dị iche iche dịgasị iche dabere na ụlọ elu dị jụụ na ogo / kemistri nke ndepụta na nrugharị mmiri, mana usoro ọgwụgwọ mmiri na-ajụkarị mmiri ga-agụnye usoro ndị a:
Jụrụ ụlọ elu etemeete mmiri oriri
Mmiri etemeete, ma ọ bụ mmiri na-anọchi ọbara ọgbụgba na nke na-amịpụ na mmiri si n'ụlọ elu ahụ dị jụụ, na-ebute ụzọ site na isi iyi ya, nke nwere ike ịbụ mmiri mmiri, mmiri obodo, ihe na-ekpo ọkụ nke obodo, mmiri na-ekpofu ahịhịa n'ime mmiri, mmiri ọma, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ isi iyi mmiri.
Dabere na ogo mmiri a, ịnwere ike ịchọghị ọgwụgwọ ebe a. Ọ bụrụ na achọrọ usoro ọgwụgwọ mmiri n'akụkụ a nke usoro mmiri ụlọ elu dị jụụ, ọ na-abụkarị teknụzụ na-ewepụ ekweghị ekwe na silica ma ọ bụ na-edozi ma na-edozi PH.
N'ebe a nke usoro a, ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị na-eme ka usoro ikuku ụlọ elu na-eme ka ọ dị elu ma na-ebelata mmiri na-agbapụta mmiri ka ọ ghara ịfefe ihe nwere ike iji ọgwụ mee naanị.
Nzacha na ultra-nzacha
Nzọụkwụ na-esote na-agbagharị mmiri ụlọ elu dị jụụ site n'ụdị ụfọdụ filtration iji wepu ihe ọ bụla kwụsịtụrụ dịka sedimenti, turbidity, na ụfọdụ ụdị ihe ndị dị ndụ. Ọ na-aba uru ime nke a n'oge na-adịghị anya, ebe iwepụ ihe ndị siri ike kwụsịtụrụ nwere ike inyere aka kpuchido membranes na reson mgbanwe reson site na nsị ọzọ ka emechara. Dabere na ụdị nke filtration eji, kwụsịtụrụ ahụ nwere ike wepụrụ ala n'okpuru otu micron.
Ion mgbanwe / mmiri dị nro
Ọ bụrụ n ’isi ike dị na isi iyi / mmiri etemeete, enwere ike ịgwọta mwepụ nke ekweghị ekwe. Kama lime, a pụrụ iji resin na-eme ka ọ dị nro; a usoro mgbanwe acid cation siri ike, nke ejiri ebubo sodium ion na-ebu resin, yana ka ekweghị ekwe gafee, ọ nwere mmekọrịta dị elu maka calcium, magnesium, na iron ya mere ọ ga - ejide molecule ahụ ma hapụ sodium molekul ahụ n'ime mmiri. Ihe mmetọ ndị a, ọ bụrụ na ha dị, ga - akpata nkwụnye ego na nchara.
N'oge a na usoro a, a na-ejikarị ojiji nke kemịkal, dị ka:
•ndị na-egbochi corrosion (wdg., bicarbonates) iji kpochie acidity ma chebe ihe ndi mejuputara
•algaecides na biocide (wdg., bromine) iji belata uto nke ụmụ nje na biofilms
•ndị na-egbochi ọnụ ọgụgụ (dịka, phosphoric acid) iji gbochie ndị na-emerụ emerụ site na ịmalite ịba ụba
Ọgwụgwọ zuru oke tupu oge a nwere ike inye aka belata kemịkal dị mkpa iji gwọọ mmiri n'oge a na usoro a, nke kachasị mma na-atụle ọtụtụ ọgwụgwọ kemịkalụ nwere ike ịdị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na a ga-ekesasị ụlọ elu mmiri dị jụụ na sistemụ ahụ, otu ebe ntinye filtration ga-enye aka n'iwepu nsogbu mmetọ ọ bụla batara site na mmetọ ikuku, ịwụfu, wdg. Iwu isi mkpịsị aka dị mma bụ na, ọ bụrụ coolinglọ elu jụrụ mmiri ọgwụ usoro chọrọ n'akụkụ-iyi filtration, banyere 10% nke na-ekesa mmiri ga iyo site. Ọ a mejupụtara a ezi mma multimedia filtration unit.
Akụkụ ikpeazụ nke ọgwụgwọ achọrọ maka mmiri jụrụ ụlọ elu bụ ịda ada ma ọ bụ gbaa ọbara site na ụlọ elu ahụ.
Dabere na mmiri mmiri nke ihe ọkụkụ chọrọ iji kesaa maka ikike jụrụ oyi kwesịrị ekwesị, osisi ga-ahọrọ ịmegharị ma weghachite mmiri site na ụdị ọgwụgwọ post n'ụdị ntụgharị osmosis ma ọ bụ mgbanwe ion, ọkachasị na ebe mmiri nwere ike ịdị ụkọ. Nke a na - enye ohere ka etinye mmiri na ihe mkpofu siri ike tinye ma wepụ ya mgbe enwere ike ịlaghachi mmiri n'ụlọ elu ma jiri ya mee ihe ọzọ.
Ọ bụrụ na mmiri ahụ site na ịda ada kwesịrị ịhapụ, ọpụpụ ọ bụla nke usoro ahụ ga-eme iji gboo iwu niile chọrọ. N'ebe ụfọdụ ebe mmiri dị ụkọ, enwere ike ịnwe nnukwu ụgwọ njikọ mmiri nsị, yana sistemụ demineralization nwere ike bụrụ ezigbo ọnụ ahịa ebe a, ebe ha nwere ike inye aka belata ọnụahịa iji jikọọ na mmiri na ahịhịa nsị. Ọzọkwa, nchụpụ nke ụlọ elu jụrụ oyi ga-agbaso iwu nchịkwa nke ọchịchị obodo ma ọ bụrụ na a na-eweghachi ọgwụ ahụ na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ọrụ nlekọta ọha na eze.
Coolinglọ elu ndị na-eme ka ụlọ jụrụ oyi bụ nnukwu ndị na-eri mmiri. Na ụkọ mmiri n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa, ọgwụgwọ mmiri dị mma nke na-enye ohere mmụba mmiri bụ ihe na-akpali akpali na-emetụta mgbe na ebe a ga-eji ụlọ elu jụrụ oyi. Tụkwasị na nke a, gọọmentị etiti, steeti na nke ime obodo na-eme ka mmiri na-agbapụta mmiri ga-akpali usoro ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe metụtara usoro mmiri jụrụ ụlọ elu.
Usoro mmechi mechiri emechi nke na - ebelata mmiri site na 90.0% na - atụnyere sistemu jụrụ oyi dị na ụlọ ọrụ kemịkalụ na ụlọ ọrụ ike ọkụ. Ya mere na - eduga n'ọchịchọ na-arịwanye elu maka usoro sekit emechiri emechi maka usoro jụrụ oyi n'ụwa niile.